महिला लघुवित्तको साधारण शेयर बाडफाड ! यसरि थाहा पाउनुहोस – Palika Express
महिला लघुवित्तको साधारण शेयर बाडफाड ! यसरि थाहा पाउनुहोस
PalikaExpress ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार 6526 पटक हेरिएको
महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको साधारण शेयर निष्काशनमा सर्वसाधारणलाई माघ ३० गते शुक्रबारबाट बिक्री खुल्ला गरि छिटोमा निष्काशन बन्द फागुन ५ गते बैंकिङ्ग समय सम्म आबेदन दिएका थिए । धेरैले आशा गरेको यस संस्थाको शेयरमा भाग्य र गोलाप्रथाले साथ दिए भबिश्यमा राम्रो प्रतिफल र लघु बित्त भएको कारण धेरै मूल्यमा बिक्री हुने आशाका साथ धेरैको पर्खाईको बिषय भएको छ । यस लघुवित्तले ४००,००० कित्ता सेयर रु १०० रुपैयाको दरले सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरिएको थियो । जसमध्ये ०.५ प्रतिशत अर्थात् ५००० कित्ता कर्मचारीलाई, ५ प्रतिशत अर्थात् २०,००० कित्ता सामुहिक लगानी कोषलाई र बाँकी रहेको ३,७५,००० कित्ता सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरिएको थियो ।
यस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको साधारण शेयर बाँडफाँड सुक्रबार हुने भएको छ। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङले यही साताको शुक्रबार सम्ममा शेयर बाँडफाँड हुने सम्भावना रहेको जनाएको हो । धितोपत्र बोर्डमा भने रिपोर्ट प्राप्त नभैसकेको / नपठाएकाले अन्तिम निर्णय भने भइनसकेको बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ ।
यस कम्पनिको निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धको रुपमा नेपाल एसविआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ । यस कम्पनिको शेयरमा अहिले सम्मको सबै भन्दा धेरै १५ लाख ४० हजार ४८ जनाले २ करोड ३४ लाख ३३ हजार ७७० कित्ताका लागि आवेदन दिएका हुन् ।
यो हिसाबले हेर्ने हो भने ६३ गुणा बढ़ी आबेदन परेको छ । यस लघुबित्तको साधारण शेयरमा लगानिकर्तालाई १० कित्ताले मात्र दीदा पनि जम्मा ३७,५०० जना भाग्यमानीले मात्र यो कम्पनिको शेयर प्राप्त गर्ने छन भने बाकी लगानिकर्ता को हात खाली हुने पक्का पक्की नै छ । यस कम्पनीको शेयर प्राप्त गर्न गोलाप्रथा र भाग्यमा नै भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।
सिंगटी हाईड्रो इनर्जीको साधारण शेयरको पहिलो कारोवारको मूल्य कति ?
५ करोड़ ५५ लाख रुपैया भन्दा बढ़ीको साधारण शेयर आउदै